Big New: Guddoonka golaha shacabka oo manta mooshin badeecooyinka ku saabsan loo gudbiyay – idalenews.com
Big New: Guddoonka golaha shacabka oo manta mooshin badeecooyinka ku saabsan loo gudbiyay
Idalenews-Mooshinkan ayaa waxaa soo diyaariyay xubnaha golaha shacabka oo tiradooda ka badan tahay 50 xildhibaan, sida uu sheegay xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka tirsan golaha shacabka.
Xildhibaanka ayaa intaa ku daray in u jeedka mooshinkan uu yahay in la dhiirigeliyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan beeraleyda maadaama dal kasta ay waajib tahay in uu ku tiirsanaado wax soo saarka beerahiisa.
“Dalkeena waa in la joojiyo u soo dhoofinta badeecooyinka dalka ka baxa, dabcan waa sida dowladaha adduunka u dhaqmaan dalkasta wixii gudahiisa ka soo baxa iyo wixii ganacsatada warshadaha ka soo saaraan lama ogola in la keeno haddii kale waxaa uu noqonayaa dal la quudiyo,” ayuu yiri Maareeye.
Xildhibaan Maxamed Cabdi Maareeye, ayaa sidoo kale, sheegay in kala dambeyn la’aanta dalka mudada dheer ka jirtay ay sababtay in la keeno dalka dalagyada ka soo go’a beeraha taasina ay tahay curiyaamin dowladdana uu waajib ka saaran yahay ilaaliso danaha dadka Soomaaliyeed.
“Dowlad kasta oo adduunka ah waxaa ay dalkeeda ka waardiyeeysaa in dadkeeda laga dhigo dad curiyaan ah maskaxda ka curiyaan ah muruqa ka curiyaan ah oo aan waxba soo saaran karin warshado sameysan karin,” ayuu sheegay xildhibaan Maareeye.
Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa sidoo kale tilmaamay in waxa oo dhan aan hal mar la wada joojin karin loona baahan yahay in wasaaradaha arintan quseyso ay qorshe keeni doonaan.
Duqeyn lagu hoobtay oo ka dhacday deegaanka Cali Fooldheere ee degmada Mahaday
Cabdi Qeybdiid oo loo doortay Guddoomiyaha Guddiga Dastuurka Labada Aqal